ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို ကဒ်ရ်ညမြတ်တွင် အီမာန်ယုံကြည်မှုနှင့်တကွ အကျိုးဆဝါဗ်ကို မျှော်ကိုးပြီး အိဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပြုခဲ့လျှင် ယခင်က ၎င်းသူ ကျူးလွန်မိခဲ့သော အပြစ်အကုသိုလ်များ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို ကဒ်ရ်ညမြတ်တွင် အီမာန်ယုံကြည်မှုနှင့်တကွ အကျိုးဆဝါဗ်ကို မျှော်ကိုးပြီး အိဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပြုခဲ့လျှင် ယခင်က ၎င်းသူ ကျူးလွန်မိခဲ့သော အပြစ်အကုသိုလ်များ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . နဖ်လ်ဆွလာသ်။ . ညဆွလာသ်။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ မည်သူမဆို ကဒ်ရ်ညမြတ်တွင် အီမာန်ယုံကြည်မှုနှင့်တကွ အကျိုးဆဝါဗ်ကို မျှော်ကိုးပြီး အိဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပြုခဲ့လျှင် ယခင်က ၎င်းသူ ကျူးလွန်မိခဲ့သော အပြစ်အကုသိုလ်များ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဟဒီးဆ်တော်တွင် ကဒ်ရ်ညမြတ်၌ အိဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း၏ ထူးမြတ်မှုနှင့် ထိုသို့အိဗာဒသ်ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းချက်လာရှိထားသည်။ သို့ရှိရာ အကြင်သူ၏ အိဗာဒသ်ပြုခြင်းသည် ကဒ်ရ်ညမြတ်ဖြင့် ကြုံကြိုက်ခဲ့ပြီး ထိုသူသည် ၎င်းညမြတ်နှင့် ယင်းညမြတ်၏ ထူးမြတ်မှုများကို အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်၍ မိမိ၏အမလ်ကောင်းမှုများအပေါ် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အကျိုးကုသိုလ်ကို မျှော်လင့်ချက်ထားကာ ၎င်းကောင်းမှု၌ (ရိယာအ်)ပြစားမှု၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုစိတ်၊ အိခ်လာဆွ်နှင့် ကုသိုလ်အကျိုးမျှော်ကိုးခြင်းတို့ဖြင့် ဆန့်ကျင်သည့် အရာများမပါရှိခဲ့လျှင် ၎င်း၏ သေးငယ်သော အပြစ်အကုသိုလ်အားလုံး ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များသည် အကယ်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဝတ္တရားအနက်မှဖြစ်ပါက စစ်မှန်သည့် ဝန်ချတောင်းပန်မှု ပြုရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းအကုသိုလ်သည် လူသား၏ ဝတ္တရားနှင့် သက်ဆိုင်နေပါက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်မှုပြုရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ၎င်းဝတ္တရားနှင့် သက်ဆိုင်နေသူ၏ ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် တာဝန်ကင်းရှင်းအောင် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကဒ်ရ်ညမြတ်၏ ထွတ်မြတ်မှုကိုတင်ပြထားပြီး ထိုညတွင် အိဗာဒသ် ခဝပ်မှုပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အမှန်စင်စစ် အမလ်ကောင်းမှုများသည် ရည်စူးချက်မှန်ကန်မှုနှင့် ကုသိုလ်အကျိုး မျှော်ကိုးခြင်းရှိမှသာ ကောင်းမြတ်သည့် ကျင့်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး လက်ခံခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . နဖ်လ်ဆွလာသ်။ . ညဆွလာသ်။ .
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွိယာမ်။ . ရမဿွာန်လမြတ်၏နောက်ဆုံးဆယ်ရက်။ .